1 Samueri 21:1-15
21 Gare gare Dhavhidhi akasvika kuNobhu+ kumupristi Ahimereki; Ahimereki+ akatanga kudedera paakasangana naDhavhidhi, akabva ati kwaari: “Nei uri woga, usina mumwe munhu?”+ 2 Dhavhidhi akabva ati kumupristi Ahimereki: “Mambo andirayira nezveimwe nyaya,+ uye ati kwandiri, ‘Usamboita kuti pave nomunhu anoziva chero chinhu chipi zvacho pamusoro pezvandiri kukutuma uye pamusoro pezvandakurayira.’ Ndarangana kuti ndisangane nevarume pane imwe nzvimbo. 3 Zvino, kana muine zvingwa zvishanu, chingondipai izvo muruoko rwangu, kana kuti chero chinhu chipi zvacho chingawanikwa.”+ 4 Asi mupristi wacho akapindura Dhavhidhi akati: “Handina chingwawo zvacho muruoko rwangu, asi chingwa chitsvene;+ ndokunge varume vacho vasina kubata vakadzi.”+ 5 Naizvozvo Dhavhidhi akapindura mupristi wacho akati kwaari: “Hatina kubata vakadzi sepaya pandakambobuda,+ uye miviri yevarume vacho ichiri mitsvene, kunyange hazvo rwendo rwacho ruri rwendowo zvarwo. Zvakadini nanhasi, apo mumwe anova mutsvene mumuviri wake?” 6 Mupristi wacho akabva amupa chingwa chitsvene,+ nokuti pakanga pasina chingwa kunze kwechingwa chokuratidzira chakanga chabviswa pamberi paJehovha+ kuti chingwa chitsva chiiswe ipapo zuva rokubviswa kwacho. 7 Zvino mumwe wevashandi vaSauro, ainzi Dhoegi,+ muEdhomu,+ mukuru wevafudzi vaSauro+ akanga aripo zuva iroro, abatwa+ pamberi paJehovha. 8 Dhavhidhi akati kuna Ahimereki: “Hapana chamuinacho here pano, pfumo kana bakatwa? Nokuti handina kutora bakatwa rangu kana zvombo zvangu noruoko rwangu, nokuti nyaya yamambo yanga iri yokukurumidzira.” 9 Mupristi wacho akati: “Bakatwa raGoriyati+ muFiristiya, wawakauraya mubani reEraa+—riri pano, rakaputirwa mujasi, seri kweefodhi.+ Kana riri iro raungatora, ritore, nokuti hapana rimwe pano kunze kwaro.” Dhavhidhi akati: “Hapana rakafanana naro. Ndipei iroro.” 10 Dhavhidhi akabva asimuka, akaramba achitiza+ Sauro zuva iroro, akazosvika kuna Akishi mambo weGati.+ 11 Vashandi vaAkishi vakatanga kuti kwaari: “Uyu haasi Dhavhidhi mambo+ wenyika yacho here? Haasi iye wavakaramba vachibvumirana vachitamba,+ vachiti,‘Sauro akauraya zviuru zvake,Uye Dhavhidhi makumi ezviuru zvake’ here?”+ 12 Dhavhidhi akatanga kuisa mashoko aya mumwoyo make, akatya kwazvo+ Akishi mambo weGati. 13 Naizvozvo akanyepedzera+ kupenga pamberi pavo,+ akatanga kuita seanopenga ari pakati pavo, akaramba achitaratadza pamasuo egedhi, akarega masiriri achiyerera pandebvu dzake. 14 Akishi akazoti kuvashandi vake: “Tarirai murume uyu ari kupenga. Muri kuuyirei naye kwandiri? 15 Ndinoda vanhu vanopenga here, zvamauya nouyu kuti apengere pedyo neni? Munhu akadai angapinda mumusha mangu here?”